Posted by Philip Shield at 11:53 AM No comments:
နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် ၏ ရွှေဘိုသနပ်ခါး သီချင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသီချင်းကို ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်ကတည်းက လွန်စွာ နှစ်သက်ပါသည်။ မြန်မာစာကို တကယ် မိမိရရ ရေးတတ်ချင်လျှင် ပြောတတ်ချင်လျှင် ဒါမျိုးသီချင်းတွေ များများ နားထောင်ရပါမည်။ ရှင်မင်းရဲ့ Coffee Corner မှာ တွေ့မိသဖြင့် တဖန် Post လုပ်လိုက်ပါသည်။
Posted by Philip Shield at 4:51 PM 1 comment:
အနောက်နိုင်ငံသားတို့ ၏ ကောင်းမြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရား
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ တသက်တာမှတ်တမ်းတွင် ဆရာကြီးသည် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက အင်္ဂလိပ်စာပေကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုသဖြင့် လက်တုန့်ပြန်ရေးခဲ့ဘူးသည်။ ထိုစာတွင် အနောက်တိုင်းမှ လူကြီးလူကောင်းပီသသူများ (ဂျင်တဲလ်မဲန်း) ၏ စိတ်နေသဘောထားကို ငါးပါးသီလ သက်သက်ကို သာ စောင့်ထိန်းသူတဦး၏ အမူအကျင့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားပေသည်။ သို့သော် ငါးပါးသီလသမားတိုင်း ဆိုးသည်ဟု မမှတ်ယူကြရန် ကြိုတင်စကားခံလိုပါသည်။ သုစရိုက်တရားများကို ကျင့်ကြံသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အဖို့လည်း ထိုဂျင်းတဲလ်မဲန်း တို့အလားတူစွာ စိတ်နေသဘောထားကြီးကြမည်ဟု စာရးသူယုံကြည်ပါသည်။ ဆရာကြီးက မြန်မာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယေဘူယျ တွေ့ရသည့် အခြေအနေပေါ် ခြုံ၍ရေးထားသည့်သဘော ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာကြီး စာမှာ...
"... ငါးပါးသီလသမားတစ်ယောက်သည် ကြွေးပူသဖြင့် မရောင်းပဲ မနေနိုင်သည့် မုဆိုးမ တယောက်ထံမှ ပစ္စည်း တစ်ခုကို တန်ဘိုးထက် ဖိနှိပ်ပြီး ဆစ်၍ ၀ယ်ချင်ဝယ်နိုင်သည်။ သီလပျက်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ဂျန်တဲလ်မဲန်း တစ်ယောက်မူကား ထိုသို့သော အမှုမျိုးကို ပြုရန် စိတ်ထဲမှ အလွန် ၀န်လေးတတ်သည်။ ခွန်အားနည်းသူ တစ်ယောက်အား ခွန်အားကြီးသူက နိုင်ထက်ကလူပြုမူခြင်းကို မြင်ရသည့်အခါ ငါးပါးသီလသမားက မျက်နှာ လွဲ၍ နေနိုင်သည်။ ဂျန်တဲလ်မန်း တစ်ယောက်မူကား မိမိကိုယ်တိုင် ခွန်အားနည်း၍ မကူညီနိုင်လျှင် အနည်းဆုံးနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ခုခံ၍ ပြောပေးပေလိမ့်မည်။ မိမိ အကျိုးအတွက် အခြားလူတယောက်က မတရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဆိုလျှင် ငါးပါးသီလသမားက မှိန်းပြီးကြည့်နေလိုက နေနိုင်သည်။ ဂျန်တဲလ်မဲန်း တယောက်မူကား ထိုကဲ့သို့နေ၍ မဖြစ်၊ သူ့အတွက် မတရားမလုပ်ပေးပါနှင့် ဟု ပြောလိမ့်မည်။ ငါးပါးသီလ သမား တယောက်သည် ကြုံကြိုက်ခဲ့လျှင် ထိုက်သင့်သည်ထက် ပို၍ အခွင့်အရေးယူလိမ့်မည်။ အခွင့်အရေးယူခြင်းသည် ခိုးခြင်းမဟုတ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ဂျင်းတဲလ်မဲန်း တယောက်မူကား ထိုက်သင့်သည်ထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေးယူရမည်ကို ရှက်တတ်သည်။ ငါးပါးသီလသမား တယောက်သည် ဖော်လံဖားနိုင်သည်။ ကပ်ပါးရပ်ပါး အလုပ်မျိုးနှင့် ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ဂုဏ်ကြီးသူများ ပိုက်ဆံရှိသူများကို ကြို့၍ ချူနိုင် မြှိုက်နိုင်သည်။ ဂျန်တဲလ်မဲန်း တစ်ယောက်မူကား ကိုယ့်သိက္ခာကို ကိုယ်စောင့်ထိန်းသည်ဖြစ်၍ မည်သူ့ဆီကမျှ ချူခြင်းမြှိုက်ခြင်းမပြု၊ ဘာကိုမျှ အလကား မလိုချင်၊ ထိုက်တန်အောင် အလုပ်လုပ်၍ ယူချင်သည်။ မည်သူ့ရှေ ဍ္ဍ်မျှ မျက်နှာ အောက်မချ။ အမြဲ ဦးခေါင်းထောင်ချင်သည်။ ဆင်းရဲသည်ကို မရှက်၊ ညစ်ပတ်ရမည်ကို ရှက်သည်။ အမျိုးမြတ်သည် ဆို၍ ဂုဏ်မတက်၊ ရိုးဖြောင့်သည့် အတွက် ဂုဏ်ယူသည်။ လိုရင်းအချုပ်ဍ္ဍ် ဂျင်တဲလ်မဲန်း တယောက်သည် (Sense of Justice and Fair Play) မိမိနှင့် ဆက်ဆံသမျှသော ကိစ္စအ၀၀တွင် သာမက မိမိ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ဍ္ဍ်လည်း မတရားသဖြင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို မမြင်လို၊ မျှမျှတတ ဖြစ်စေလိုသော စိတ်သဘောထားမျိုး အမြဲကိန်းအောင်းသူ တယောက်ဖြစ်လေသည်။ ... "
Posted by Philip Shield at 2:31 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 10:48 AM 1 comment:
IC Show in Singapore
IRON CROSS ROCK CONCERT
အငဲ၊ မျိုးကြီး ၀ိုင်ဝိုင်း၊ Rဇာနည်၊ ဖြိုးကြီး၊ Lလွန်းဝါ၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ စင်ဒီ၊ ကြိုးကြာ
နေရာ။ ။ Jurong East Sports & Cultural Centre (Opposite to Chinese Garden MRT)
နေ့စွဲ။ ။ 21st Janurary 2007
အချိန်။ ။ 06:00 PM
ဈေးနှုံး။ ။ S$ 30, 40, 50, 60
လက်မှတ် အရောင်းဌာန။ ။
WIN AYE PTE LTD, Peninsula Plaza
ကျော်လွင်ချမ်း 9687 6971
ကယ်လဗင် 8123 5848
ဇော်မောင်မောင်ထွေး 9735 6581
Posted by Philip Shield at 2:32 PM 1 comment:
မြန်မာအိုင်တီသမားတွေSingapore မှာအလုပ်ရကြသတဲ့ (အပိုင်း-၃)
အလုပ်မရှာခင် အရင်ဆုံး နေရေးထိုင်ရေး သွားလာရေး အတွက် စုံစမ်းရအုံးမည်။ စင်္ကာပူက Transportation service ကောင်းသည်။ ရထား လဲရှိသည်။ ဘတ်စ်ကား လဲရှိသည်။ Taxi လဲရှိသည်။ သွားရေးလာရေး ကတော့ တော်တော် အဆင်ပြေသည် ဟုဆိုရပေမည်။ ရထားကို MRT ဟုခေါ်သည်။ MRT စီးစီး ကားစီးစီး ez-Link card လိုသည်။ ကြိုပြီး ၀ယ်ထားရသည်။ ကဒ်ဖိုး ငါးဒေါ်လာ၊ ခရီးစရိတ်အတွက်ဖြည့် ၁၀ ဒေါ်လာ၊ စုစုပေါင်း၁၅ ဒေါ်လာ လောက်ပေးရမည်။ MRT Station တွေ မှာရှိတဲ့ Passenger Service တွေမှာ ၀ယ်ရသည်။ ကဒ်က တစ်ခါဝယ် ထားလျှင်ရသည်။ ဖြည့်ဖြည့်ပြီးသုံးရသည်။ ကုန်ခါနီးလျှင် General Ticketing Machine တွေ (သို့) Add Value Machine တွေမှာ ပြန်ဖြည့်ရသည်။ GTM တွေကတော့ MRT Station တွေမှာပဲရှိသည်။ AVM တွေကတော့ MRT Station တွေမှာရော၊ Bus Interchange တွေမှာပါ တွေ့ရတတ်သည်။
MRT Station တွေ မှာရှိတဲ့ Passenger Service
MRT Station များတွင် တွေ့ရတတ်သည့် General Ticketing Machine များ (ezLink card ပြန်ဖြည့်ရန်)
Bus Interchange တွေမှာပါတွေ့ရသော Add Value Machine များ (ezLink card ပြန်ဖြည့်ရန်)
MRT စီးလျှင် Station ထဲသို့ ezLink card ကို အ၀င်တစ်ခါ ပြရသည်။ မိမိသွားလိုရာ Station ရောက်သော် ၄င်း ezLink card ကို အထွက်တွင် တစ်ခါ ပြရသည်။ စက်က ခရီးအကွာအဝေးအလိုက် ကျသင့်ငွေကို နှုတ်ယူထားသည်။ ဘတ်စ်ကားစီးလျှင် လည်း အ၀င်တစ်ခါ အထွက်တစ်ခါပြရသည်။ ဘတ်စ်ကားစီးလျှင် ရှေ့ပေါက်မှ ၀င်၍ နောက်ပေါက်မှ ထွက်ပါ။ ဒီမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ရှေ့ပေါက်မှဝင်၊ ကဒ်ပြ၊ သွားလိုရာ အရပ်သို့ရောက်လျှင် ကဒ်ကို တစ်ဖန်ပြန်ပြ ၍ နောက်ပေါက်မှထွက် လေ့ရှိကြသည်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် လူအလွန်ကျပ်လျှင် ရှေ့ပေါက်မှလည်းထွက်လို့ရပါသည်။
MRT Station တစ်ခု၏ ၀င်ထွက်ပေါက် မြင်ကွင်း၊ မြှားစိမ်းလေး ပြထားသောအပေါက်ကသာ ၀င်ထွက်ရမည်။ သင့် ezLink ကဒ်ကို ပုံမှာပြထားသည့် နေရာတွင် ပြပြီး ၀င်ရသည်။
ဘစ်ကား တစ်စီးပေါ်ရှိ ၀င်ပေါက်အ၀တွင် တပ်ဆင်ထားပုံ
MRT တစ်စီး Station တစ်ခုမှ အထွက် မြင်ကွင်း
SBS Bus service
MRT စီး ချင် လျှင် MRT Map ကို မစီးခင် အရင်ဦးဆုံး ကြည့်ကြည့်ပြီး သွားရသည်။ အ၀င်ဝများမှာ MAP များ ချထားသည်။ ရထားပေါ်မှာလည်း MAP ရှိသည်။ နောက်တော့ အလွတ်ရသွားလိမ့်မည်။ See Map...
Singapore မှာက Streetdirectory.com က အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ရောက်ကာစက Streetdirectory မှာပဲ ကြည့်ကြည့်ပြီး ဘာရထားစီးရမယ်၊ ဘာကားစီးရမယ် မသွားခင် အရင်ဆုံး ကြို လေ့လာရသည်။ အခုရောက်တာ ကြာပေမယ့်လည်း သွားနေကျနေရာမဟုတ်လျှင် Streetdirectory.com ကို သုံးနေရဆဲဖြစ် ပါသည်။
Posted by Philip Shield at 12:49 PM2comments:
မြန်မာအိုင်တီသမားတွေSingapore မှာအလုပ်ရကြသတဲ့ (အပိုင်း-၂)
စင်္ကာပူကို ရောက်လာပြီ။ မြန်မာပြည်က ဆောင်လာခဲတဲ့ အစိမ်းလေးတွေကို စလုံးပိုက်ဆံ နဲ့ ပြန် လဲရအုံးမည်။ ငွေလဲဖို့ အတွက်မပူပါနှင့်။ Money Changers တွေက နေရာတကာမှာ အများကြီးရှိသည်။ Money Changers တွေက လေဆိပ်မှာလဲ ရှိသည်။ Plaza တွေ Shopping Mall တွေမှာလည်း ဆိုင်တွေ နေရာအနှံ့ရှိသည်။ Peninsula Plaza မှာလည်း ရှိပါသည်။ ဗမာဆိုင်တွေ Peninsula Plaza ၃ထပ် နဲ့ ၄ထပ်မှာ အများကြီးပဲ။ ကျွန်တော် ငွေလဲတုံး ကတော့ မြန်မာချင်း အားပေးချင် သဖြင့် Peninsula Plaza က "ပြုံးတရာဆင့်" ဆိုင်မှာပဲ ပါလာတဲ့ အစိမ်းလေးတွေ ထုတ် ရောင်းလိုက်သည်။
Money Changer @Changi Airport, Singapore
စင်္ကာပူက အသုံးများတဲ့ အကြွေစေ့လေးတွေ ငွေစက္ကူလေးတွေ ကို ပြရအုံးမည်။ ငါးပြား၊ ဆယ်ပြား၊ ပြားနှစ်ဆယ်၊ ငါးမူး၊ တစ်ကျပ် တို့မှာ အကြွေစေ့များ၊ ၂ ကျပ်တန်၊ ငါးကျပ်တန်၊ ၁၀ တန်၊ ၅၀ တန် ငွေစက္ကူများကို နှင့် နေ့စဉ် သုံးစွဲ နေကြပါသည်။ (တစ်ကျပ်တန် ငွေစက္ကူ ရှိပါသည်။ ၁၀၀၀ တန်၊ ၁၀၀၀၀ တန် တွေ လဲရှိသည်။ အသုံးအရမ်းနဲသည်။ အပြင်မှာ မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်သည်။)
၁) စင်္ကာပူက ငွေအကြွေစေ့များ (မှတ်ချက်။ ၁ပြား စေ့ကသိပ်မသုံးတော့ပါ၊ ၅ပြားစေ့အထိပဲ သုံးတာများသည်။)
၂) စင်္ကာပူက ၂ဒေါ်လာတန် ငွေစက္ကူ
၃) စင်္ကာပူက ၅ ဒေါ်လာတန်ငွေစက္ကူ
၂) စင်္ကာပူက ၁၀ ဒေါ်လာတန် ငွေစက္ကူ
၂) စင်္ကာပူက ဒေါ်လာ ၅၀ တန် ငွေစက္ကူ
(စင်္ကာပူမြန်မာတွေ အချင်းချင်း ကတော့ ၂ ကျပ်တန်၊ ၅ကျပ်၊ တစ်ဆယ်၊ ငါးဆယ် လို့ပဲ အလွယ်ခေါ်ကြသည်။)
ပိုက်ဆံထဲမှာ ပါတဲ့လူကြီးက စင်္ကာပူ၏ ပထမဆုံး သမ္မတ Yusof Bin Ishak ဖြစ်သည်။ NUS ၏ တတိယမြောက် Chancellor လဲဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ တွင် NUS က ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ D.Litt ရရှိခဲ့သည်။
Posted by Philip Shield at 11:09 AM No comments:
မြန်မာအိုင်တီသမားတွေSingapore မှာအလုပ်ရကြသတဲ့ (အပိုင်း-၁)
အခုတလော မြန်မာပြည်က ပညာရှင်တွေ Singapore ကို ထွက်ထွက်လာကြ၏။ အလုပ်လာရှာကြ၏။ ရတဲ့သူလည်း ရကြ၏။ ရလျှင်ပျော်၍မဆုံးပြီ။ တချို့လည်း အလုပ်ရပြီးကာမှ EP/S-Pass Reject ထိ၍ ပြန်တဲ့သူလည်း ပြန်ရ၏။ ရင်နာ၍မဆုံးပြီ။ ဆဲဆို ၍ အောင်ဖျာလိပ် ပြည်တော်ပြန်ကြသည်။ ပြန်ပြီးကာမှ Approval Letter ကျလာ၍ ၀မ်းသာအားရဖြင့် ပြန်လာကြရတဲ့ သူတွေလည်းရှိသည် ဟုကြားရသည်။
မြန်မာပြည်မှ စတင်ထွက်ခွာလာပြီးနောက် လေယာဉ်ပေါ်ရောက်လျှင် လေယာဉ်မယ်ကလေးတွေက Social Visit Pass အတွက် Embarking/Disembarking Card ခေါ် White Card ဆိုတာ လေးများ တစ်ခုစီပေးလိမ့်မည်။ ဖြည့်ရသည်။ ဒီအတွက် အိတ်ကပ်ထဲမှာ ဘောပင်တစ်ချောင်းဆောင်လာပါ။ အဲဒီကဒ်က အရမ်းအရေးကြီးသည်။ မပျောက်စေ့နှင့်။ အဲဒီကဒ်မှာ နာမည်၊ ပတ်စပို့နံပါတ်၊ စင်္ကာပူမှာ နေမည့် တည်းခိုမည့်လိပ်စာဖြည့်ရမည်။ ရှောရှောရှုရှု ဖြည့်ဖို့ အသိတစ်ယောက် ၏ လိပ်စာကို ကြိုမေးထားရမည်။ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းပြီး တော်တော်လေး လမ်းလျှောက်ရသည်။ အပေါ်က Sign board တွေ မြှားတွေလဲ ကြည့်ကျက်ပြီးသွား။ Transit ဆိုတာဘက် ၀င်မသွားမိစေနဲ့အုံး။ သွားရင်းသွားရင်းနဲ့ Immigration Counter တွေ အများကြီးကို တွေ့ရမည်။ အဲဒါတွေမှာ ၀င်ရမည်။ ကောင်တာတွေက အများကြီးရှိသည်။ လူရှင်းတဲ့ သဘော ကောင်းမည့် ဥပတိရုပ်ရှိသည့် ကောင်တာကို ၀င်။ ကိုယ့်ကိုယ် ကို Confident အပြည့်ဖြင့် ၀င်။ ကြောက်ကြောက် ကြောက်ကြောက်မလုပ်နှင့်။ ကတုန်ကယင် လုပ်လေ ရစ်ချင်စရာ ကောင်းလေ ဖြစ်တတ်သည်။ ဗမာပြည်ကလာတာ ဆိုလျှင် ဘယ်မှာနေမှာလဲ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပါလဲ မေးတတ်သည်။ မလေး ကုလား၊ မလေး ကုလားမများ (အုပ်ဆောင်း ဆောင်းထားတတ်သည်) ထိုင်နေသော Check Point ဘက်တွင် ၀င်မိသူများ အရစ်ခံရမည်မှတ်။ (အများအားဖြင့် အရစ်ခံရတတ်သည် ဟုကြားရသည်။)
တတ်နိုင်လျှင် US ဒေါ်လာ တစ်ထောင်လောက် (မြန်မာပြည်က အထွက်မှာတော့ ၄င်းပိုက်ဆံကို ၀ှက်လာ) သယ်လာခဲ့နိုင်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ ကိုယ်မှာ အရံသင့် ဆောင်ထား ရမည်။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပါလဲ မေးလျှင် ဗုန်းခနဲ ချက်ချင်း ချပြလို့ရသည်။ ဒီက Sponsor လုပ်ပေးတဲ့ သူ ရှိယင်လည်း သူ့ PR/EP/S-Pass ကဒ် စတာတွေကို Copy တစ်စောင်တောင်း ထားရမည်။ ဖုံးနံပါတ်တွေ၊ နေရပ်လိပ်စာတွေ မေးထားရမည်။ " စင်္ကာပူ ကို ဘာလာလုပ်တာလဲ" လို့မေးရင် "အလုပ်လာရှာတာ" လို့ မဖြေသင့်၊ "အလည် လာတာ" လို့် ဖြေရမည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Social Visit Pass အတွက် ဗီဇာသက်တမ်း ကို ပတ်စပို့ပေါ်မှာ တလ ထုပေးလိမ့်မည်။ တခါတလေကြတော့ လည်း ဖြေတဲ့ အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ၂ပါတ်ပဲ ထုပေးသည် ဟုကြားရသည်။
Expired မဖြစ်ခင် ဗီဇာ သက်တမ်း တိုးထားရမည်။ သက်တမ်းတိုးဖို့ PR မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ရှာထားရမည်။ ထိုသူက အာမခံပေးမှ တိုးပေးသည်။ ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးဖို့ ICA ခေါ် Immigration Checkpoint Authority ရုံးကို သွားရမည်။ Lavendar MRT က ထွက်ထွက်ချင်း အဲဒီရုံးကို ရောက်သည်။ အလုပ်ရသွား ပြီး EP လျှောက်ထားတုံး တန်းလန်းကြီး White Card က Expired ဖြစ်သွားလျှင် တော့ MOM က နှစ်ပါတ်တိုးပေးသည်ဟု ကြားသည်။ MOM (Ministry of Manpower)
စင်္ကာပူ၌ အလုပ်ရှာကြသောအခါ Jobstreet.com/JobsDB.com တို့မှာ ရှာကြ၏။ တချို့လည်း မလာခင်ထဲက ကြိုလျှောက်ထား ကြ၏။ ကံကောင်းသူများ ၂ရက် ၃ရက်ဖြင့် အလုပ်ရကြ၏။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားတာလဲ ပါမည်ဟု ထင်သည်။ ကံခေသူများ ၃လပြည့်လို့အလုပ်မရ။ ဘာလိုနေလို့လဲတော့ မသိ။
Resume ကောင်းကောင်း ရေးထားရသည်။ Cover Letter ကောင်းကောင်းရေးထားရသည်။ အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်ရမည်။ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ လုပ်ရမည်။ မီးပွင့်အောင် အသကုန် လျှောက်ရမည်။ Resume မရေးတတ်လျှင် စင်္ကာပူ အထာနပ်သော အသိတစ် ယောက်ယောက် ကို အကူအညီတောင်းရမည်။ တချို့ အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက် တစ်နှေ့လျှင် အလုပ် ဆယ်ခုနှုံးဖြင့် အလုပ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့် ၃၀၀ ခန့် လျှောက်ကြရသည်။
တချို့က Resume ထဲမှာ ကိုယ်သိသမျှတွေ အသကုန် ထည့်ရေးသည်။ များများပါလျှင် ကောင်းသည်ဟုထင်သည်။ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ တကယ်က အလုပ်ကြော်ငြာမှာပါတဲ့ Requirements တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် သင့် Resume ကို ကြည့်ကျက်ပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပြန်လုပ်ရမည်။ Highlight လုပ်သင့်တဲ့ စကားလုံးတွေကို Highlight လုပ်၊ Bold လုပ်ပေးတန် Bold လုပ်ပေး၊ Underline လုပ်ပေးတန် Underline လုပ်ပေး ထားရပေမည်။
ကိုယ့်ဓါတ်ပုံ တွေထဲက မျက်နှာလေး ကြည့်လိုက်လျှင် ကြည်လင်နေသော ပုံကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုံရှာ ပြီး Resume ထဲမှာ ထည့်ပေး။ မှုံကုပ်ကုပ်ပုံကို ထည့်လိုက်လျှင် Attraction လုံးဝမရှိပါ။ အဲဒါမှ ကိုယ့် Resume ကိုဖတ်မိတဲ့ သူက "အလို… ငါရှာနေတာ ဒီလိုလူပဲ…အင်း… သူ့ကို အင်တာဗျူးချင်လိုက်တာ" ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး တဖွားဖွား ပေါ်အောင် စီမံရမည်။ ရေးရမည်။ ကလေးကစားစရာ မဟုတ်။ သင့်ကိုယ်သင် marketing လုပ်နေရတာ အမြန် ထွက်သွားအောင် ရောင်းချနေတာ ဆိုတာ မမေ့အပ်ပေ။
ဒီလိုနဲ့ အင်တာဗျူး များခေါ်ကြလိမ့်မည်။ အများအားဖြင့် Interview ရပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖုံးနဲ့ခေါ် တတ် ပြီး Email မှ Location Address ပို့တတ်သည်။ Email ကလည်း ပို့တတ်သည်။ အင်တာဗျူးလေး တစ်ခု နှစ်ခုရတာနဲ့ အောင်ပြီ အောင်ပြီဆိုပြီး လက်ခမောင်းမခတ်နဲ့ အုံး။ သိပ်ဝမ်းမသာ နှင့် အုံး။ အင်တာဗျူး ရတာနော်။ အလုပ်ရတာ မဟုတ်သေးဘူးနော်။ Job Offer မရမချင်း လက်ကိုင်းသန်သန် သာ အသကုန် ဆက်လျှောက် သင့်သည်။ ဇနက္ကထုံး နှလုံးမူရ၏။ အလုပ်မရမချင်း လုံ့ဝီရိယကို လုံးဝ မလျှော့အပ်ပေ။ Interview သွားလျှင် ကိုယ်က နာရီဝက် ကြိုရောက်နှင့်ရမည်။ ဒီလိုနဲ့ Interview အတွက် Appointment လုပ်ထားသည့် ရုံးခန်းရောက်လျှင် Form ဖြည့်ရမည်။ သင့် Resume တွေ Document တွေ၊ ရှိသမျှ အကုန် သယ်သွားသင့် သည်။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Project တွေ ဘာတွေရှိယင်လဲ ယူသွား၊ မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုံးနံပါတ်တွေ ဘာတွေလဲ မှတ်သွားရမည်။ Form ဖြည့်ဖို့က ၁၅ မိနစ် နာရီဝက်ပဲ အချိန်ရတတ်သည်။ အဲဒီလို အကုန်ဆောင်သွားတော့ Form ဖြည့်တော့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေ မှာဖြစ်သည်။
အင်တာဗျူးသွားရလျှင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ၀တ်စားသွားဖို့ မမေ့ အပ်ပါ။ မြန်မာပြည်ကနေ သစ်သစ်လွင်လွင် တစ်စုံကောင်း တော့ ထည့်လာခဲ့ရမည်။ ယောကျာင်္းလေးဆိုရင် ရှပ်အဖြူ လက်ရှည် ဘောင်းဘီအနက်၊ ခြေအိတ်အနက်၊ သန့်ပြန့်စွာ ဖီးလိမ်း ၀တ်ဆင် ပြီးသွား သင့်သည်။ မိန်းကလေးဆိုလျှင်လည်း ကလက်တက်တက်၊ မိပ်ကပ်တဖွေးဖွေး၊ တိုနံ့နံ့ မဖြစ်စေရ။ တိုက်ဂေါလဲ မဖြစ်စေရ။ မျက်နှာ၊ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်း သန့်ပြန့်ပြီး သန့်ရှင်းနေရမည်။ လက်သည်းခွံတွင်း ချေးမရှိရ။ ခံတွင်းနံ့မနံအောင် Menthol လေးဘာလေးငုံသွား ရသည်။ ချွေးနံ့လဲမနံစေရပေ၊ ရေမွှေးတွေ လဲ မွန်းနေအောင်ဆွတ်မသွားအပ် ပေ။ ချွေးနံတွေ မနံရုံ သင့်ရုံပဲ ဆွတ်ရ၏။ ရုပ်ကလဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကြည်ကြည်လင်လင်၊ စိတ်ကလဲ ပဲသန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကြည်ကြည်လင်လင်။ အခု သင့်မှာ သံလိုက်ဓါတ်တွေ ပြည့်လာပြီ ဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ အလုပ်ခန့်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာ အောင် စီမံ သွားရမည်။ သင့်ကို English လိုပဲ ဗျူးမှာဖြစ်သည်။
မိမိစိတ်ကလေးကို Relax လုပ်၍ အင်တာဗျူး မေးသူ ၏ မျက်လုံး နှစ်ခုကြားကို စိတ်အေးအေးလေးနဲ့ စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီး "ငါ့အရည်အချင်းတွေ ငါ့ပညာတွေနဲ့ မင်းတို့ကို ကူညီမလို့ လာတာ" လို့ စိတ်ထဲကညွှတ်ပြီး မိမိစိတ် အတွင်းကျကျ ဂလိုင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး ရွတ်ဆိုလိုက်ပါ။ ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် မေတ္တာဓါတ်ကို ကြိုတင်ပို့လွတ် ထားလျှင် ပြောရဆိုရတာ ပို ကောင်းသည်။ မေတ္တာဓါတ် အစွမ်းဖြင့် သင့် မျက်လုံး၊ သင့်အသံ မှာလည်း သံလိုက်ဓါတ်တွေ အားကောင်း လာမည်။ လုံးဝ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပါသည်။
စင်္ကာပူမှာတော့ အင်တာဗျူး မေးခွန်းတွေက နှစ်ပိုင်းရှိတတ် ပါသည်။ HR နှင့် Technical ဖြစ်၏။ HR ခေါ် Human Resource မေးခွန်းတွေက သင့်ကို စိတ်စမ်း တာဖြစ်သည်။ Attitude ကောင်းမကောင်း စစ်တာဖြစ်သည်။ Technical အပိုင်း မှာ သင့် နည်းပညာကို စစ်လိမ့်မည်။ သင့် Resume မှာ ပါတဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကို သင် တကယ်ကျွမ်းမကျွမ်း စစ်မည်။ Technical ပိုင်းတွင် လိုအပ်လျှင် တစ်ခါတရံ Written ဖြေရတတ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ လက်တွေ့လုပ်ပြရသည်။ ခက်ရာခက်ဆစ်တွေ လဲ လျှောက်မေးတတ်သည်။ ကိုယ်ဖြေနိုင်သလောက် ရိုးသားစွာ၊ အထူးရိုးသားစွာ ဖြေ။ မဖြေနိုင်ရင် ထားခဲ့။ မရမှာ အလွန်ကြီး မကြောက်နဲ့၊ မပူနဲ့။ ရချင်ဇောနဲ့ လဲ မလိမ်နဲ့ မရွီးနဲ့။ ရိုးသားနေတဲ့ စိတ်…အဲဒီ စိတ်မှာ အင်အားတွေရှိတယ်။ သတ္တိတွေရှိတယ်။ Power တစ်မျိုးလဲ ရှိတယ်။
အင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေ အတွက် ကြိုတင်ပြီး လေ့လာချင်ယင် www.geekinterview.com မှာ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အပိုင်းလေးတွေကို ကြိုဖတ်သွားရင် အလွန် အသုံးတည့်တတ်တယ်။ ကြုံသမျှ အင်တာဗျူးတော့ Technical မေးရင် အဲဒီထဲက လွတ်တယ်ကို မရှိလှပါ။ (ကိုယ့်ပညာ ကလဲ စစ်စစ်မှန်မှန် နဲ့ တကယ် တတ်တာဖြစ်ရမှာပေါ့လေ) ။ ဒီ Geekinterview.com ကို ညွန်းတာကလည်း Cheat လုပ်ဖို့ ညွှန်း တာမဟုတ်ပါ၊ မဆိုင်တာတွေ လျှောက် ပြင်ဆင် မိမှာ စိုး၍ ဖြစ်ပါသည်။ ပမာဆိုရသော်… ကွဲစေလိုသည့်နေရာ မြန်မြန်ကွဲအောင် အက်ကြောင်း ပေးထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Expected Salary နဲ့ပါတ်သက်လို့ကတော့ ကိုယ် ကျေနပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်သည်။ ပေါက်ဈေးရယ်လို့ တော့ တိတိကျကျကြီးမရှိပါ။ မြန်မာပြည်ကလာသည့် အိုင်တီပညာရှင်များ ကတော့ ၁၈၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ ကြားတော့ ရကြသည်ဟု ကြားသည်။ အချို့လည်း ၁၅၀၀ လောက်နှင့် နားလည်မှုယူပြီး လုပ်နေကြသည်။ တချို့လည်း တကယ်ကို လစာကောင်းကြသည်။ ကံပေါ်မူတည်သည်။
အလုပ်ဆိုတာကလည်း လစာတစ်ခုတည်းနှင့် တိုင်းတာလို့မရ။ လစာကောင်းပြီး နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ညစ်တွန်းတွန်းနေ ရတာတွေလည်းကြားရသည်။
တကယ်တော့ ဘ၀ ဆိုတာကလည်း မလွယ်။ နန္ဒာသိန်းဇံ ၏ ဘ၀အဓိပ္ပါယ်နှင့် ဘ၀သစ္စာတွင် ဖတ်ဖူးသည်။ ရေတွင်းပျက်ထဲရောက် နေသော လူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေသည်။ ရေတွင်းဝမှာ နဂါးကြီးတစ်ကောင် အောက်ခြေမှာ နဂါးကြီးတစ်ကောင်၊ ကိုယ်က ရမိရရာ
ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည် က သစ်ကိုင်းငုတ်လေးတစ်ခု၊ ၄င်း သစ်ငုတ်လေး၏ အရင်းကို ကြွက်ဖြူနှင့် ကြွက်မည်းက တချိန်လုံးကိုက်နေ၏။ ထိုအခိုက် ၀ယ် သစ်ကိုင်း တစ်နေရာမှ ပျားလဘို့တစ်ခု မှ ပျားရည်စက်ကလေး က တစ်စက် တစ်စက် ကျနေသည်။ ၄င်းပျားရည်စက် ကလေး များကို ပင် အငမ်းမရ ပါးစပ်ဖြင့် ခံယူယင်း မကုန်နိုင် မခမ်းနိုင် အရသာကြီးဟု ထင်နေမိလေ၏။ (ကြွက်ဖြူနှင့် ကြွက်မည်းဆိုသည်မှာ နေ့နှင့်ည ကို
ဆိုလိုသည်။ ပျားရည်စက်ကလေးများ မှာ အထင်မှားနေသော ရေပွက်ပမာ စည်းစိမ်။ နဂါးကြီးနှစ်ကောင်မှာ သေမင်း။ အထက်တက်တက် ... အောက်ဆင်းဆင်း... သေမင်းက စောင့်နေသည်။)
တချို့လည်း တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင် ဖြင့်ရကြသည်လည်း၏။ တချို့လည်း Agent တွေနှင့်ဆက်သွယ်မိပြီး ရကြသည်လည်း ရှိ၏။ တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင် ဖြင့်ရလျှင် များသောအားဖြင့် ကုမဏ္ဏီသေး တတ်၏။ ကုမဏ္ဏီသေးတော့ Job Secure သိပ်မဖြစ်တတ်။ သူ့စီးပွားကောင်းနေမှ ကိုယ်က မြဲမှာဖြစ်သည်။
Agent တွေဖြင့် ရလျှင် လျှင် ကုမဏ္ဏီကြီးတွေ ဖြစ်နေတတ်၏။ တိုက်ရိုက်တော့ မဟုတ်၊ Agent ရဲ့ လက်အောက်ပေါ့။ တဆင့် ပြန်ငှားတဲ့ သဘောပေါ့။ ကုမဏ္ဏီကြီး တော့ Permanent ရဖို့မလွယ်ပြန်။ Contract ဖြင့် ညားကြရသည်။ Agent Fee ကတစ်လစာ ပေးရတတ်လေ့ရှိသည်။ တချို့ Agent တွေကလည်း လစဉ်ခုတ်သည်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စင်္ကာပူ ၌ အလုပ်အကိုင်အတွက် Pass သုံးမျိုးရှိ၏။ EP ၊ S-Pass နှင့် WP ဖြစ်၏။ EP ရော S-Pass ရော လစာကိုတိုင်းသည်။ ဘွဲ့တိုင်းသည်။ Background ကြည့်သည်။ အနည်းဆုံး $2500 ကျော်မှ ချပေးသည်။ S-Pass က $1800 ကျော်မှ ချပေးသည်။ S-Pass က အလုပ်ရှင် ကုမဏ္ဏီ ၏ Quota ကိုစစ်သေးသည်။ အချိုးမှာ Local ၅ယောက်ရှိလျှင် နိုင်ငံခြားသား S-Pass တစ်ယောက်နှုံးဖြစ်၏။ မိမိနိုင်ငံသားများ အတွက် အလုပ်လက်မဲ့မှုနှုံး ကို ထိန်းသိမ်းနည်း တစ်မျိုး ဖြစ်လေသလော မသိပါ။
(Immigration Checkpoint Authority) http://app.ica.gov.sg
Posted by Philip Shield at 3:50 AM5comments:
Can u guess whts thz ????????
Scroll down ..
disk used in 1956...
The Volume and Size of 5MB memory storage in 1956 ...
Start appreciating your4GB pen drive.
Posted by Philip Shield at 2:27 PM 1 comment:
နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မီးအိမ်ဆွဲလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့တယ်။ ပထမတော့ ဒိုင်အိုဂျီးနီးစ်လို့ထင်လိုက်တာ။ နောက်မှ မဟုတ်မှန်းသိတယ်။ အဲဒီလူဟာ.. ကျွန်တော်နဲ့ အသက် သိပ်မကွာလှဘူး။ ကကြီး၊ ခကွေးတွေ ပေနေတုန်း ရှိသေးတယ်။
“ဘယ်လိုလဲ၊ ခင်ဗျားက ဒိုင်အိုဂျီးနီးစ်ကို အတော်သဘောကျလို့လား”
ကျွန်တော်က အော်မေးတော့ သူက ခေါင်းယမ်းပြတယ်။
“ဟင့်အင်း၊ ကျုပ်က 'လက်ဆင်း'ကို သဘောကျတယ်”
“အော်.. ဟုတ်ပြီ။ သူ့စကားတစ်ခွန်းက အတော် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တာပဲနော်”
“ဟုတ်တယ် .. မှားချင်မှားပါစေ၊ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ကိုယ်လုပ် ဆိုတဲ့ စကားလေ။ သိပ်မှန်တဲ့စကားပေါ့။ ကျွန်တော့်လက်သုံးစကားပဲ”
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး ရယ်မောလိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့သူဟာ အသွင်တူမယ့်ပုံ ရှိတယ်လို့ ထင်စရာပဲ။ ကျွန်တော်က မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် မေးလိုက်တယ်။
“ဒါနဲ့ နေပါဦး။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မီးအိမ်ကြီးနဲ့ ခင်ဗျားက ဘာရှာနေတာတုန်း”
“အေးဗျာ။ ၀မ်းနည်းစရာပဲ။ ဦးနှောက် ကျပျောက်သွားလို့ ရှာနေရတာ…”
တာရာမင်းဝေ ၏ ကျွန်တော်နှင့် အသံခုနစ်ထပ် မှ
Posted by Philip Shield at 2:17 PM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 2:34 PM No comments:
ပြုံးနေတာကို မြင်ရရင် သိပ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်။ အပြုံးမှာ စိတ်ကို ဆွဲဆောင်စေတဲ့ ဓါတ်တမျိုးပါတယ်။ ပြုံးတာကိုတွေ့ရရင် ကိုယ်ပါ အလိုလို ပြုံးချင် လာတတ်တယ်။ ဒီ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပါ။ လုပ်ထားတဲ့သူက တော်တော် Creative ဖြစ်တယ်။
Posted by Philip Shield at 2:12 PM 1 comment:
Information Age မှာက လုပ်ချင်စိတ် ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ လုပ်နည်းက အင်တာနက်ပေါ်မှာ အကုန်ရှိပြီးသား။ ခက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ခက်တယ် လို့ပြောကြတာက ဘာကို ဘယ်လို လုပ်ရမယ်၊ ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိကြသေးလို့ပါ။ တစ်ခုခု ကို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲဖြစ်နေလား? http://wehow.ehow.com တို့ http://www.wikihow.com တို့မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဥပမာ လုပ်နည်းတွေဆိုရင် အပ်လုပ်နည်း၊ မုန့်လုပ်နည်း၊ ဟင်းချက်နည်း၊ ကစပြီး ဒုံးပျံလုပ်နည်း အဏုမြူဗုံးလုပ်နည်း အထိ၊ စီးပွားရေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ရှိတဲ့ပိုက်ဆံManageလုပ်နည်း၊ စီးပွားထောင်နည်း၊ Idea ကောင်းကောင်း ထုတ်နည်း၊ ဗိုက်နာနေသော ကုမဏီကောင်းကောင်းလေးများ ကို အလကားနီးနီးဈေးဖြင့် ရှာနည်း ၀ယ်နည်း၊ Boss ကို ဘယ်လို Fire လုပ်ပြီး ကိုယ်ကဘယ်လို သူဌေးဝင်လုပ် လျှင်ရသည်ဆိုသောနည်း။ Relationship ဆိုရင်လဲပဲ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များကို ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြုမူနည်း၊ ရည်းစားစာရေးနည်းကအစ၊ ကလေးထိန်းနည်း၊ ယောက်ခမကြည်အောင် နေနည်းအထိ။ အင်း အစုံပါပဲ လားဗျာ။
Posted by Philip Shield at 12:51 PM No comments:
" ဘုန်းကံတက်လာပြီဆိုရင် သတိထားပါ ၊ မေ့မေ့လျော့လျော့ မနေပါနဲ့ ၊ လောကဓံကောင်း လေးပါးပြီးရင် ဆိုးလေးပါး လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိထားတဲ့သူဟာ ဆိုးလေးပါးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ဆောက်တည်နိုင်တယ်"
Posted by Philip Shield at 11:59 PM No comments:
Myanmar:Time to say hello
Posted by Philip Shield at 8:03 PM 1 comment:
Free ရတာလေးတွေနဲ့ YouTube Clone လုပ်ကြည့်ကြပါစို့
ဒါလေးတွေ Download လုပ်ပြီး လက်တည့်စမ်းကြပါ။
FFMPEG က အဓိကဖြစ်တယ်။ သူက FLV ရအောင် Conversion လုပ်ပေးတယ်။
FLV file ဖြစ်ပါမှ YouTube လို Broadcast လုပ်လို့ရမယ်။
နောက်အရေးကြီးတာက FLV Player ပါ။
သူက FFMPEG က ထွက်လာတဲ့ FLV file ကို Play ပေးလိမ့်မယ်။
Click here to download Source Codes and tools
1) FFMPEG (Free FLV Conversion) (Download Windows Version)
2) FLV Player (flash video player) (Download)
3) Huge file uploader using Flash (Download CodeProject Link)
4) ASP.NET, C# (Visual Web Developer Studio 2005)
I've been searching extensively foraopen-source (or low-cost) alternative for video conversion to the .flv format. This search typically leads directly to FFmpeg, an open source video compression and conversion tool. FFMPEG is umbelievably fast, and handles Flash Video withoutaproblem. The biggest hurdle that I've run into when trying to design it into my applications is that it does not havea.NET interface and the open source libraries it uses are long and confusing. Over the past3years, I've been searching extensively foraopen-source (or low-cost) alternative for video conversion to the .flv format. This search typically leads directly to FFmpeg, an open source video compression and conversion tool. FFMPEG is umbelievably fast, and handles Flash Video withoutaproblem. The biggest hurdle that I've run into when trying to design it into my applications is that it does not havea.NET interface and the open source libraries it uses are long and confusing. This week, however, I foundapost on Daniel's blog which containsaproject that wraps the FFmpeglibraries. I haven't gottenachance to look at it too thoroughly, but it should definately open up the opportunity to make use of FFmpeg's tools inamanaged environment. Even if Daniel doesn't take the project much further, it looks likeagreat start toacomplete .NET FFmpeg library!
2) FLV Player
The Flash Video (FLV) Player can be used standalone, without the need for the Flash authoring tool. The player allows you to show your videos more controlled and toabroader audience than with Quicktime, Windows Media or Real Media. if you do work with Flash, this player is also smaller and easier to adjust than the components that accompany Flash.
3) Huge file upload with flash client
It is difficult to findadecent upload control that handles large files, showsaprogress bar, and still works inamedium-trust hosting environment. The problem with these controls is medium-trust does not allow Reflection. But this does not mean that we are out of luck. One of the problems these controls strive to overcome is the server running out of memory when large files are uploaded by streaming the uploaded file to disk. But the HttpPostedFile class description states that "By default, all requests, including form fields and uploaded files, larger than 256 KB are buffered to disk, rather than held in server memory." So, we don't have to worry about this problem. The other issue is feedback to the user by way of progress bar. Enter Flash's fileReference API, which allows you to uploadafile from Flash, and also keep track of it. And FileReferenceList which allows the user to select multiple files.
4) ASP.NET, C# (Visual Web Developer Studio 2005)Provides everything you need to begin building Web applications out of the box.
Posted by Philip Shield at 3:13 PM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 12:21 PM No comments:
" Look out = ဂရုစိုက်သည်၊ သတိပြုသည်။ "တနေ.တော့ အင်္ဂလိပ်စာသိပ်မတတ်တဲ့ လူတယောက်ဟာ ရထားနဲ. ခရီးသွားနေတုန်းမှာ ပြတင်းပေါက်ပေါ် လက်ကလေးတင်၊ ခေါင်းကို လက်ပေါ်မှေးတင်ပြီး လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ. ရထားဟာ ကွေ.ကောက်သွားရာကနေ လိုဏ်ဂူတခုထဲသို. ၀င်ခါနီးမှာ ရထားပေါ်ပါလာတဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ခရီးသည်တယောက်က အဲဒီလူကို Look out လို.ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တဲ့လူက Look ဆိုတာ ကြည်.တာ၊ out ဆိုတာ အပြင် လို. တွေးမိပြီး၊ ဒီလူ ငါ့ကို ရထားအပြင်ဘက်ကြည်.ခိုင်းတာပဲ ဆိုပြီး ရထားပြတင်းပေါက်ကနေ ခေါင်းထုတ်ကြည်.လိုက်တော့ အရှိန်နဲ.သွားနေတဲ့ ရထားကြောင့် ခေါင်းတအားပြူလိုက်တဲ့လူဟာ လိုဏ်ဂူနံရံနဲ.တိုက်ပြီး သေပါလေရော” တဲ.။P.S: ဆရာ ဦးခင်မောင်ဝင်း၏ အင်္ဂလိပ်စာအတိုအထွာ (၃) မှ ကောက်နှူတ်တင်ပြသည်။ ဖတ်ပြီး ပြုံးရုံလောက် ပြုံးရင်တောင် ကျေနပ်ပါတယ်။
Posted by Philip Shield at 12:05 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 12:13 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 1:17 PM 1 comment:
Just unzip ALL the files toafolder in your hard disk. Both vdownloader.exe and ffmpeg.exe must be in the same directory. Otherwise, videos won't be properly converted.
Download : http://www.softpedia.com/progDownload/VDownloader-Download-51327.html
Posted by Philip Shield at 3:48 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 11:32 PM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 1:08 AM No comments:
Well I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes You always smile but in your eyes Your sorrow shows Yes it shows
I can't live If living is without you I can't live I can't give any more I can't live If living is without you I can't give I can't give anymore
Posted by Philip Shield at 11:06 AM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 10:01 AM No comments:
Windows Presentation Foundation (.NET Framework 3.0)
The Windows Presentation Foundation (or WPF), formerly code named Avalon, is the graphical subsystem feature of the .NET Framework 3.0 (formerly called WinFX) and is directly related to XAML . It will be pre-installed in Vista, the next version of the Microsoft Windows operating system. WPF is also available for installation on Windows XP SP2 and Windows Server 2003. It providesaconsistent programming model for building applications and providesaclear seperation between the UI and the business logic. WPF application can be deployed on the desktop or hosted inaweb browser. It also enables richer control, design, and development of the visual aspects of Windows programs. It aims to unifyahost of application services: user interface, 2D and 3D drawing, fixed and adaptive documents, vector graphics, raster graphics, animation, data binding, audio and video.
Website အချို့ကို SQL Injection နည်းနဲ့ လွယ်လွယ်လေး Hack လို့ရတယ်။ Login Page တစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုပါစို့။ အောက်မှာပြထားသလို အစမ်း ရိုက်ကြည့် လိုက်ပါ။ ဒီအကြောင်းမသိသေးတဲ့ Website တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် SQLServer သုံးထားတဲ့ Website တွေပေါ့။
ဥပမာ။ ။ hi' OR 1=1 -- ကို UserName သို့၊နှင့် Password မှာ ဆွဲရိုက်ပြီး Login ကို နှိပ်ချထည့်လိုက်။
ရေးတဲ့သူက အောက်မှာပြထားသလို ရေးထားကောင်း ရေးထားပါလိမ့်မယ်။
သူကတော့ သူ့ဘာသာသူ လုံလှပြီအောက်မေ့နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ UserName သို့၊နှင့် Password မှာ
ကို သွင်းထည့်လိုက်ရင် (Injection လုပ်လိုက်ရင်) နောက်ကွယ်က SQL Query မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားကြည့် လိုက်ပါ။
SELECT * FROM User WHERE Name = 'hi' OR 1=1 --' AND Password = 'hi' OR 1=1 --'
ဒီလိုဖြစ်လာမယ်နော်။ ကောင်းပြီ။ ဒီလိုဆိုရင် ကာကွယ်တဲ့နည်းမရှိတော့ဘူးလား။ လွယ်ပါတယ်။ Parameterized Query တွေကိုသုံးလိုက်ပါ။ Parameterized Query ဟာ သင့် Website ကို SQL Injection အလုပ်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်တယ်။ ကိုယ့် Website ကို ပြန် Hack ကြည့်ကြပါခင်ဗျား။ မလုပ်ရသေးရင် လုပ်ထားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အောက်မှာ Parameterized Query ကိုရေးပြထားပါတယ်။
SqlConnection objConnection = new SqlConnection(_ConnectionString);
Ref:Improving Web Application Security: Threats and Countermeasures, Patterns & Practices
Posted by Philip Shield at 10:37 PM2comments:
Daily Horoscope from Yahoo Astrology through http://www.shokk.com
အောက်က Source-Code ကလေးကတော့ ASP.NET, C# နဲ့ရေးထားတဲ့ RSS Reader လေးပါ။ XmlTextReader ကို သုံးထားပါတယ်။
string myUrl = Request.QueryString["rss"]!=null? "http://www.shokk.com/cgi-bin/astrology_rss.pl?tid="+Request.QueryString["rss"].Trim(): "http://www.shokk.com/cgi-bin/astrology_rss.pl?tid=aries";
XmlTextReader reader = new XmlTextReader(myUrl);
myGrid.DataSource = ds.Tables["item"];
<asp:DataGrid ID="myGrid" runat="server" AutoGenerateColumns="false" Width="100%" ShowFooter="false" ShowHeader="false" BorderStyle="None" GridLines="None" Font-Name="tahoma" Font-Size="9">
<ItemTemplate><div align="center"><a href="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"link")%>" target="_blank" style="color:blue;text-decoration:underline;font-size:12pt;">
<a href="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"link")%>" target="_blank" style="color:green;font-size:7pt;">
Posted by Philip Shield at 5:53 PM No comments:
Kuala Lumpur photos taken from KL Tower, Malaysia
KL မှာလည်း လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နေလို့ ပုံတွေ သိပ်မကြည်ဘူး။ (အင်ဒိုနီးရှား ဘော်နီယိုကျွန်းမှာ တောမီးတွေလောင်လို့ မီးခိုးရိုက်နေတာ)
Posted by Philip Shield at 11:00 PM No comments:
My Google, Google Reader, My Yahoo, My MSN စတာတွေ အခြား RSS Reader တွေမှာ ဒီ Blog ထဲက Post တွေ ထည့်သွင်းထားချင်ရင် ဒီနေရာမှာ Link တွေ ရှိပါတယ်။ အသစ်အသစ် Post လုပ်တိုင်း လုပ်တိုင်း သင့်ရဲ့ Reader တွေမှာလည်း Update ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပါ။
Fig1. RSS Feeds Links
Fig 2. My Google တွင် Feed လုပ်ပြီးသောအခါ။
Posted by Philip Shield at 11:05 AM No comments:
Google မှ မနောမယ ထမင်းဝိုင်း။ အမဲသား နှင့် အာလူး ၊ အုန်းထမင်းနှင့်ကြက်သားဟင်း ၊ ရွှေဖယုံသီး အုံးနို့နှပ် ၊နန်းကြီးသုပ် ၊ ခရမ်းသီးမီးအုံး မန်းကျည်းရည်ဆမ်း ၊ ဘိန်းမုန့် .. စုံလို့ပါပဲဗျာ။
Posted by Philip Shield at 11:45 PM No comments:
Information Age မှာက လုပ်ချင်စိတ် ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။...
ခမာဂုဏ် " သူတပါးက ကဲ့ရဲ့လာတဲ့အခါ အပြစ်တင်လာတဲ့အခါ...
အင်္ဂလိပ်စာမတတ်လို.သေတဲ့သူ " Look out = ဂရုစိုက်သည်...